Malahelo Ny Maha-Mpiady Anaty Akata Azy Izy, Saingy Manomboka Fiainana Vaovao Ao Amin’ny Fireneny Ity Menavazana Tao Amin’ny FARC teo Aloha ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2016 12:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, 日本語, Italiano, English
FARC mpiady anaty akata nandritra ny dingana fandriampahalemana Caguan 22 Martsa 2006. Sary avy amin'ny DEA Raharaham-bahoaka. Sehatra hoan'ny Daholobe.
Ity tantara avy amin'i Jasmine Garsd ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 31 Oktobra 2016. Naverina navoaka indray izany ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty..
Eo amin'ny farany ambanin'ny lohasaha voalalotra simenitra, eo akaikin'ny moron'ny lakandrano, misy fivarotana kely mivarotra akondrolahy, “Cola” ary sigara. Fa tsy manana akondro intsony izy ireo..
Ilay vehivavy miandraikitra ny fivarotana, izay mandeha eo akaikin'i Xiomara, dia matetika tsy maintsy miady mafy amin'ny faniriana handositra. Ampitahainy amin'ny zavatra misambotra ny vatany ilay faniriana handositra.
“Toa tsara izany aho, ary iray minitra manaraka avy eo, te-handeha aho,” hoy i Xiomara. ” Te-handeha fotsiny aho. Te-hivoaka. Mila mandeha aho. “
Rehefa mandeha amin'io lalana io izy dia mandrehitra sigara ary angamba mijery fandaharana samihafa ao amin'ny fahitalavitra.
“Te-handeha aho. Ary tsy afaka, satria efa manana trano aho ankehitriny,” hoy izy.
Hatramin'ny tsy ela akory izay no mpiady anaty akata ho an'ny Tafika Mitam-piadiana Revolisionera ao Kolombia, na FARC i Xiomara. Nandray anjara tamin'ny ady lava indrindra tamin'iny ilan'ny tany iny izy – nifandona tamin'ny fitondram-panjakana nandritra ny 52 taona ny mpikomy Marksista FARC. Namela maty 260.000 ny ady, nampihorohoro ny Kolombiana nandritra ny taona maro tamin'ny alalan'ny fifindra-monina an-terisetra, fakàna an-keriny, fampijaliana mahatsiravina ary fanjavonan'olona.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra, nolavin'ny ampahany manify maro an'isa amin'ireo Kolombiana ny fifanarahana fandriampahalemana izay nifampiraharahàna nandritra ny taona maro. Niverina nidinika an-databatra ny andaniny roa ankehitriny, ary misy fampitsaharana vonjimaika ny poabasy .
Nitàna toerana lehibe tamin'ny dingan'ny fandriampahalemana ny vehivavy, ary noderain'izao tontolo izao i Kolombia tamin'ny ezaka nataony ho fampidirana mivandravandra ireo filàna sy ireo olan'ny vehivavy. Nampanantena hamorona karazana zana-bondrona miralenta mba hanadihady ny heloka an'ady mifandraika amin'ny maha-lahy na maha-vavy, nampiroborobo ny zon'ny fananantany ho an'ny vehivavy tantsaha izany, ary ilay fifampiraharahàna dia nametraka ny feon'ireo vehivavy niharam-boina ho lohalaharana sy anivo.
Na izany aza, mbola maro ny vehivavy nandà ilay fifanarahana. Ny sasany nilaza fa sazy henjana no tian'izy ireo homena ho an'ireo mpikambana ao amin'ny mpiady anaty akata. Ny hafa indray matahotra fa mety hanome anjara toerana lehibe loatra ao amin'ny governemanta ho an'ireo Marksista mpikomy izany.
Raha mahavita mikarakara fifanarahana fandriampahalemana vaovao izy ireo, dia tsy maintsy mahatakatra fomba hanampiana tsara ireo vehivavy toa an'i Xiomara ny governemanta: Misy maherin'ny 17.000 ny mpiady anaty akata mavitrika, ary tombanana ho ny 40 isan-jato no vehivavy. Ary fotoana manokana mahatsiravina no ananan'izy ireo mba hiverenana ho amin'ny fiainana sivily.
Ao amin'ny tanànan'i Florencia ny fivarotan'i Xiomara, ao amin'ny moron'ny Amazonia Kolombiana, ao amin'ny faritra manodidina izay misy fianakaviana an'arivony mitampify, nafindra toerana noho ny fifandonana mitam-piadiana. Eo anatrehan'ireo mpanjifa, dia mampahatsiahy ny nahatonga azy voalohany ho mpitolona izy.
14 taona izy tamin'izany. Tsy niteny tamin'ny fianakaviany na ny namany izy hoe handeha.
“Efa hatramin'ny fony aho mbola zazavavikely no efa tia basy. Nieritreritra aho hoe afaka miditra polisy na miaramila. Nefa mba hahafahanao miditra any dia mila mianatra ianao, nefa tena nahantra be aho. Noho izany, ny zavatra tsotra indrindra dia ny ….mpiady anaty akata. Tsy nitaky anao hianatra io,” hoy izy.
Manatevin-daharana ny FARC ny olona noho ny antony samihafa. Voatery miditra ao ny sasany. Maro no miditra noho ny antony rariny ara-tsosialy. Ny hafa, toa an'i Xiomara, dia te-handehandeha fotsiny. Ny fientanentanana sy ny haja azo amin'io fotoana io noho ny filanjana fitaovam-piadiana dia tsy zavatra tsy misy dikany ho an'ny vehivavy iray ao anaty fiarahamonina fatra-panavaka ny lahy sy ny vavy.
“Nanohana kabary tsara lahatra momba ny fitovian-jo ny FARC”, hoy i Kimberly Theidon, mpampianatra ao amin'ny oniversiten'i Tufts. Izy dia mampianatra fanadihadiana iraisam-pirenena ny maha-olombelona, ary niasa be tokoa tao Kolombia.
Hoy Theidon, momba ny fampanantenana rehetra nataon'ny FARC, nahita ny hanafiny tsara ireo vehivavy tao anatin'io :”Renareo ny momba ny fanalan-jaza an-tery, fanabeazana aizana an-tery ary ny fanerena hiara-mandry amin'ny olona izay tsy voatery ho tianao. Mamoy zaza izay nirianao hobeazina. “
Nangenahena i Xiomara rehefa nanotaniako raha efa natahotra izy avy teo. “Eny e, mafy ny fiainana ao, tsy hiteny aminao aho hoe fifaliana sy firavoravoana ny ao. Tsia, natahotra aho,” hoy izy.
Amin'ny ankapobeny miteny amin'ny feo kely izy, noho izany dia somary migobona, rehefa mivadika ho tabatabanà Jeneraly. “Fantatrareo fa amin'ny fotoana rehetra ny bala dia mety afaka hamely anareo, ka hamono anareo. Izany no mampatahotra. Nefa jereo; mianatra ianao. Milaza aminareo aho, ho zatra izany ianareo. Ho zatra ianareo ary hianatra.”
“Talohan'ny maha-mpiady anaty akata anao, zanako vavy ianao. Manantena aho fa hody ianao amin'ny Krismasy. Mialà tao. Amin'ny Krismasy, azo atao daholo ny rehetra.” Fanentanana Saribe avy amin'ny Minisitry ny Fiarovana Nasionaly Kolombiana
Tiany izany. Nitoetra tao amin'ny FARC nandritra ny 15 taona i Xiomara. Nifindrafindra nanerana an'i Kolombia izy, tany an-tendrombohitra sy tany an'ala. Mandra-pahatongan'ny fotoana namparary azy. .
Nampangainy ny fanabeazana aizana nomen'ireo dokoteran'ny mpikomy azy. Nolazainy fa ny hormonina no tena namparary azy. Ary tonga dia ratsy fa nanesoran'ny mpiady anaty akata azy.” Nilaza tamiko izy ireo fa tsy misy ilàna ahy intsony. Ary tsy afaka nanao izany intsony koa aho, mazava loatra. Izay no farany lavitra afaka nalehako,” hoy izy.
Nilaozany ny ala ary nody izy mba hiketrika izay hataony manaraka. Ary nampatahotra izany. “Natahotra ny hivoaka any ivelany aho. Tena natahotra. Tsy handainga aho, mbola matahotra aho. Tsy matahotra ny haratra aho. Tsy mahazo aina fotsiny aho. Satria toy ny mahatsapa hoe lasa biby kely an-tendrombohitra aho.”
Ireo mpiady toa an'i Xiomara dia tokony hifandray amin'ny manampahefana rehefa mandao ny FARC. Fa tsy niteny na tamin'iza na tamin'iza izy hoe tafaverina. Mpiray vodirindrina taminy no nitoroka azy. Tonga ny tafika mba hisava raha manana fitaovam-piadiana izy. Tamin'izay fotoana izay no nanaovany dingana fisoratana anarana ofisialy, tantanan'ny governemanta Kolombiana, miaraka amin'ny fanohanan'i Etazonia.
Mpikatroka tokony ho 48.000 no niditra tamin'ilay fandaharanasa tao anatin'ny 12 taona farany. Nanomboka trano fenenana tetezamita izany. Misy vola aloa ho takalon'ny fanohizana ny fianaranao, na ny fianarana fandraharahàna iray. Ary be dia be ny torohevitra. Matetika zavatra eritreretintsika fa efa azontsika, toy ny fandraisana fiara fitateram-bahoaka, na fakàna fotoana amin'ny dokotera.
Monica Monje dia psikology voatendry hiaraka miasa amin'i Xiomara. Milaza amiko izy fa ny tolon'i Xiomara dia lehibe lavitra noho ny mandeha miantsena. Tsy mahazo antoka ny fomba ahatongavana ho vehivavy ao Kolombia i Xiomara.
Tena hafahafa ny mandre an'i Xiomara miresaka momba izany: tsara bika izy, tsara tarehy ary tena manaitra. Mampita fitokisana mampilamindamina izy. Nefa milaza amiko izy, saika mitolagaga amin'ny tenany ihany, fa na vehivavy aza, dia tia asam-batana, sy rivodrivotra any an-tokotany.
“Ny marina? Tianao holazaiko anao ny tena fahamarinana marina? “niato kely i Xiomara . “Malahelo izany fiainana izany aho. Izay no fahamarinana. Jereo, satria tao amin'izany fiainana izany … miova toerana foana ianao. Miasa foana ianao. Ny vatanao dia mihetsika foana. Ary ianao koa dia voahodidina olona maro. Mitovy amin'ny fianakaviana izany.”
Mbola manome toerana lalina ny maha-lahy sy maha-vavy ny fiarahamonina Kolombiana. Ny fialàna ao an-trano, maloto, ny fanaovana asa vatana – heverina fa tsy asam-behivavy ireo. Mahatsapa fiovana ao amin'ny tenany i Xiomara – mbola matanjaka ka afaka mandeha manerana ny firenena miaraka amin'ny fitaovam-piadiana, nefa tonga malemy noho ny fipetrahana ao am-pivarotana. Iray amin'ireo sedra lehibe amin'ny fampiverenana ny vehivavy mpikomy ho ao amin'ny fiarahamonina. Nandritra ny taona maro izy ireo no efa niaina adrenaline sy tantara nahafinaritra. Ary ankehitriny dia andrasana amin'izy ireo ny mba hiverina mora foana ho tonga vehivavy mijanona an-trano.
Mahatsiaro fanentanana iray nataon'ny Ministry ny Fiarovana Kolombiana i Profesora Theidon, mba hanesorana ireo vehivavy hivoaka avy amin'ny tafika mpikomy. “Saribe izay toy ny hoe dokam-barotra lokomena. Malamalama ilay izy. Ary nisy vehivavy nitsikitsiky sy via ankosotra tsara. Miresaka ny ‘Afaho ny tenanao.’ … ‘Ry mpiady anaty akata, mialà tao ary mihevera tena ho toy ny vehivavy indray! “
Raha mahavita manasonia fifanarahana fandriampahalemana miaraka amin'ny tafika mpikomy i Kolombia, ho voarakitra an-tantara izany. Ho tapitra ny ady lava indrindra teto amin'ity lafiny amin'ny planeta ity.
Fa ity no fanamby: Mbola misy mihoatra ny 17.000 ny mpiady any, any an-tendrombohitra sy anaty ala mikitroka. Antenaina hiverina tampoka ao anatin'ny fiarahamonina izy ireo. Vehivavy ny maro amin'izy ireo, toa an'i Xiomara. Milaza i Theiden fa mba hahitana vokany amin'izay fifanarahana fandriampahalemana rehetra, tsy maintsy handinika indray ny fomba hitondrany ireo vehivavy mpiady ny governemanta.
“Amiko, ny fandaharanasa dia azo takarina tahaka ny hoe, ianao manafaka lehilahy, satria ireo lehilahy mitondra fitaovam-piadiana dia heverina ho toy ny loza mitatao ho an'ny fiarovana,” hoy izy. “Ny Hafatra ho an'ny vehivavy dia hoe: ‘miverena mipetraka an-trano.’ Ndeha anaovy indray ny lokomenanao, miverena indray ao an-trano. … Ary ny tena mahatohina, iverenana any afara, karazana fahalalana ny zavatra mety hilain'ireo vehivavy ireo afaka taona maro nahitàny ny tenany ho mpandray anjara ara-politika. “
Tsy tena nanana namana i Xiomara. Azo antoka fa tsy manana namana vehivavy izy. Eritrereto izao: Nanomboka tamin'ny faha 14 taona ka hatramin'ny faha-30 taonany, tany anaty ala sy tany an-tendrombohitra foana izy. Ary ankehitriny izy tafaverina, ary tsy afaka miresaka amin'ny olona fantany tamin'izany fotoana izany.
Nanasa ahy ho any ambadiky ny trano izy mba hifoka sigara, teo amin'ny lavarangana ambonin'ny lakandrano iray. Maloto ny rano, saingy milamina eo. Ary tsy nielingelina teo aminay nandritra ny minitra vitsy ny vadiny. Izay fotoana niresahany momba izay manelingelina azy. “Nampaharary ahy izany. Tena nampaharary ahy izany. Tena nanakorontana ahy ny fanabeazana aizana. Tsy afaka miteraka aho.”
Amin'ny ankamaroan'ny fiarahamonina Kolombiana, ny tsy fahafahana miteraka dia heverina ho tsy fahombiazana amin'ny maha-vehivavy. Rehefa tsy hitan'ny vadiny, nanontany azy aho: Raha azony natao, mbola mety hiverina hiady miaraka amin'ny mpikomy ve izy?
“Na tiako aza, tsy afaka aho, noho ny olana ara-pahasalamana”, hoy izy. “Mazava ny hevitro ny amin'io. Raha miverina aho dia hanahirana an-dry zareo fotsiny. Tsy … Tsy ilaina intsony aho. “
Nirotsaka ny takariva, ary efa manomboka maizina ny lohasaha. Fotoana tokony handehanako izao. Rehefa niteny izany izy, toy ny hoe fangatahana ny fahenoana izany, nefa taty afara rehefa mihaino ny rakipeon'ny tafa sy dinikay, toy ny zaza ny fandrenesana azy.
“Nahoana ianao no handeha sahady? Nahoana ianao no tsy mijanona elaela? “
Noho izany dia nijanona nifoka sigara iray aho. Ary avy eo dia tena tsy maintsy nandeha.